Midgihii Habar-majeeteen Oo Xaafadda Wadajir Ee Magaalada Garoowe Ka Qaxaya Iyo Ciidamada Somaliland Oo Laga Baqayo Inay Qabsadaan – Codka Qaranka Tanadland
Subaxdii ay taariikhdu ahay (08/01/2018) maalintii ka horeysey, naagaha Habar-majeerteen ee tuutaha inta gashada hubka ku xaragoonjirey, oo aan aqoon sida loogu dagaalamo. Hidaha iyo dhaqan kana u leh oo looga bartay marka ay col muuqiisa arkaan in ay kala cararaan. Sidii dhawr jeer oo hore ka dhacday tuulooyinka (Ganbadhe) iyo (Tukoraq), ciidamada Somalilad waxay qabsadeen iyadoo mar hore ay ka carareen maleeshiyadii horeyu joogey ee Habar-majeerteen. Dhawrka jeerba maxaysatada Habar-majeerteen waxay heleen xog ah, in aroorta hore ay ciidamada Somaliland ay soo weerari doonaan. Raga u soo digi jireyna waxay ahaayeen rag Dhulbahante ah oo ciidanka weerarka ah la socdey.
Dhawrkii jeerba ciidamada Somaliland waxay qabsadeen tuulooyinka (Ganbadhe) iyo (Tukoraq) iyadoo Dhebayacadu xog heleen oo wakhti hore ay ka carareen. Waayadii hore ciidamada Somaliland waxaa looga bartay in marka ay qabsadaan tuulooyinka (Ganbadhe) iyo (Tukoraq), inay inta mudo saacado gudahood ah ama maalin ay haystaan ay isaga baxaan oo ay dib ugu laabtaan halkii ay ka soo duuleen. Xataa mar waxaa dhacday in inta ciidamad Khaatumo ay weerar ku qaadeen maleeshiyada Dhebayaco oo haysta tuulada (Tukoraq), ay rag uga laayeen ayna ka qabsadeen tuulada. Oo mar kaas kedib inta ciidamada Somaliland inta ay soo weerareen tuulada (Tukoraq) ay ka qabsadeen ciidanka Khaatumo. Dabeedna inta ay beesha Dhebayaco ay la hadleen ay ku yiraahdeen “Ku soo noqda tuulada (Tukoraq) anagu waanu idiinka tageynaaye”. Oo ay mar kaas dhacday inay ciidamada Somaliland ay ku wareejiyaan isla maalintii ay qabsadeen (Tukoraq), maleeshiyada beesha Dhebayaco.
Waayodaasi waxay ahaayeen waayadii ay beelaha Isaaq iyo Habar-majeerteen ay heshiiska ku ahaayeen dibindaabyeynta iyo gumaadka beesha Dhulbahante. Waa dhexdeer ah oo sii horeysey ayaa waxaa dhacday in ciidamada Somaliland inay tuulada (Ganbadhe), ay si nabad ah oo uusan wax dagaal ahi ka dhicin ay ugala wareegaan maleeshiyada Habar-majeerteen. Subaxa ciidamada Somaliland ay qabsadeen tuulada (Ganbadhe), ciidamada Somaliland waa’ay ogaayeen in meeshaas wax dagaal ihi uusan ka dhici doonin. Oo marka qawsaarada calooshooda u shaqeysteyaasha ah ee Dhulbahante oo ciidamada Somaliland ku jira, ay ku war geliyaan goorta la soo weerari doono maleeshiyada Habar-majeerteen. In mar kaas maleeshiyada Habar-majeerteen ay goobta ka carari doonaan inta aan loo imaan.
Ciidamada Somaliland markii ugu danbeysey oo ay si nabad ah ku qabsadeen tuulada (Ganbadhe), sidii horay looga bartay kama aysan bixin ee waa ay degeen. Hadaba iyada oo uu xaalku sidaas yahay ayaa waxaa dhacday in ciidamada Somaliland oo uga bartay meesha ay weeraraan, in ugu yaraan 12 saacadood ka hor ay ka cararaan maleeshiyada Habar-majeerteen. In subaxdii taariikhdu ay ahayd (08/01/2018) ay ku qabsadeen si nabad ah tuulada (Tukoraq). Iyadoo subaxdii ciidamada Somaliland ay qabsadeen tuulada (Tukoraq) galabtii ka horeysey, maleeshiyada Habar-majeerteen ee aan looga baran inay rag iska dhiciyaan ay ka carareen tuulada (Tukoraq). Maleeshiyada Habar-majeerteen ee isku magacaabay inay yihiin (Danab) ayaa isla galabtaas waxay soo galeen xaafadda Habar-majeerteen ay ka degto magaalada Garoowe ee Wadajir.
Argagaxa Beesha Habar-majeerteen Haysta
Beesha Habar-majeerteen waa reer aad u nugul oo aan lahayn karti ay isku difaacaan. Waa reer dagaal kasta oo ay galaan iyo cid kasta oo ay la diriraanba, goob qura kuley ku tahayna aan weligood rag uga guuleysan. Marka laga reebo Habar-majeerteen dhexdooda oo ay ku kala adkaadeen mudo 70 sanadood haatan laga joogo. Oo beesha Dhebayaco ay dagaal uga adkaatay beesha Warsangeli oo ay ku gumeysey. Welina ilaa iyo maanta ay dhalada ka saarantahay oo ay buuraha Gal-gala ku cayr-cayrsanayso.
Laakiin beesha Bah-Ararsame oo ah laf ka mid ah laf hoosaadyada lafta (Shir-shoore) oo ka mid ah lafaha beesha Dhulbahante, iyo beesha Dhebayaco dagaalkii dhex maray oo soo jiitamahayey mudada 12 ka sanaddood ah. Waxaa dagaal kaas goos-gooska ah oo u sababta ahaa in beelaha (Bah-Ararsame) iyo (Jaamac Siyaad) ay Somaliland ku biiraan. ku adkaaday beesha (Bah-Ararsame) oo beesha Dhebayaco goob kasta oo ay dagaal isaga hor yimaadaan ku jebisey. Dooxateyn tiina uga adkaatay oo rag badan uga laysay. Walow beesha (Bah-Ararsame) degaamadeeda inta badan dagaaladu ay ka dhacayeen. Oo ujeedada beesha Dhebayaco ay ahayd in maadaama beesha (Bah-Ararsame) ay kaligeed tahay oo aysan lafaha kale ee Dhulbahante u soo hiilinayn, in beesha (Bah-Ararsame) dagaalka uga adkaadaan oo ay dhul kooda ka qabsadaan.
Mudada 12 ka sanaddood ah beesha Dhebayaco waxay ula dagaalameysey laf hoosaad beesha Dhulbahante ah, oo aysan jirin wax hiil tolnimo ah oo ay ka heleen lafaha kale ee Dhulbahante. In beesha Habar-majeerteen ay ka aargudato beesha (Bah-Ararsame) dagaalkii ay hormuudka ka ahaayeen ee lagu jebiyey sanadkii 2007 -kii. Markii laga qabsaday gobalka Sool beesha Dhebayaco iyo cayayaanka ay ku adeegato.
Faraqa u dhexeeya Habar-majeerteen iyo beesha (Bah-Ararsame) waxa weeye sinjigooda ayaa aad u kala duwan. Beesha (Bah-Ararsame) waxaa iska dhalay Dir iyo daarood, Isaaq iyo Harti, Arab iyo Shir-shoore. Sinjigooda iyo sawracooduna waa gob gobi dhashay. Laakiin Habar-majeerteen waxa “Habar-majeerteen” loo yiri. Harti wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyey oo beesha Daarood ah, oo ka guursada beel aan beesha Dir ahayn gabar. Naag taasina waxay ahayd naag midgaan ah oo beesha reer (Kuul Beer) ah oo baqtiga cunta. Lana yiraahdo (Majeerteen) oo markii naag nasab ah oo Dir ah Harti uu guursadey calool jileec u dhimatay.
Iyadoo ciidamada Somaliland hadba degaan cusub ay ka qabsanayaan midgaha habar-majeer iyadoo wax dagaal ahi uusan dhicin, oo ciidamada Somaliland oo aan soo gaarin hadba loo sii banaynaayo meeshii ay rabeen inay qabsadaan. Sidii waayadii hore looga bartayna ciidamada Somaliland, hadba meesha cusub oo ay qabsadaan aysan dib uga laabanaynin. Ayaa hadana waxaa jira dhawr arimood oo isbiirsaday oo aan waayadii hore dhicijirin, hadase waayadaan danbe soo kordhay. Waayadii hore beesha Habar-majeerteen waxa keliya oo ay isku halayso inay ka hor joogsato awooda ciidamada Somaliland waxay ahayd Tigreega haysta Itoobiya. Waayadii hore eyda Habar-majeerteen waxay kuligood aaminsanaayeen in inta ay Ogaadeen tigreega u dhiibayaan inay rajo leeyihiin. In tigreegu uu ka difaacahayo Somaliland oo inta uu kala hadlo uu ku oranayo niman kaasi anay ii shaqaynayaane ha iga taabanina.
Marka hada ah xaalku wuxuu marahayaa “Isaaq Alamtara Soo Dhhaf”. Ciidamadii Somaliland waxay marba marka ka danbaysa ay ku sii siqahayaan magaalada Garoowe. Lagamana yaabo in midgaha Habar-majeerteen oo inta tuutaha xirtay la baxay guutada (Danab), bal iska daah inay inta ka hor tagaan ay la dagaalamaane. Xataa lagama yaabo inay jihada ay ka jiraan ciidamada Somaliland inay hal cabad ah u ridaan, cabsi ay ka qabaan in xabad daasi ay soo de-dejiso inuu dagaal dhaco. Oo Marka uu dagaalku bilowdo ciidamada Somaliland ay si sahlan oo nabad ah ay ku qabsadaan, magaalada Bosaso iyo xaafadda wadajir ee magaalada Garoowe. Arinta kale ee ugub waxa weeye, taagdarida Habar-majeerteen marna wax ka qarsoomikara maysan ahayn Somaliland. Oo mar kasta Somaliland waa’ay ogaayeen hadii ciidamada Somaliland ay damcaan inay qabsadaan, magaalada Bosaso iyo qayb ka mid ah magaalada Garoowe. In aan laga yaabin suuragalna aysan ahayn in maleeshiyada Habar-majeerteen intay ka hortagaan ciidamada Somaliland, inay ku dhiiradaan inay la dagaalamaan.
Laakiin waxaa suuragal ah oo laga filankarey Habar-majeerteen, in marka cabsidu ay ka badato oo ay nafta u yaabaan. Inay la soo baxaan dhaqanka midguhu ay sinjiga u leeyihiin ee lagu yaqaan habar-majeerteen. Taasoo ah inay midgaha Habar-majeerteen ay dhexdooda is-qab-qabsadaan oo ay is eedeeyaan. Sababta ay koox-koox isugu qabsanayaan iyadoo uu cadow kaabiga u joogana, maaha macnaheedu in kooxi ay qaldantahay ee waxa keliya oo ay awoodaan ama ay samayn karaan. Ayaa waxay tahay inay iyagu dhexdooda is qab-qabsadaan, oo midba midka kale uu eedeeyo. Maadaama aysan suuragal ahayn in Habar-majeerteen ay ku heshiiso inay rag iska dhiciyaan oo ay dagaalamaan, haba laga xoog badnaado oo ay dhintaan iyaga oo sharaftooda difaacanaya.
Ciidamada Somaliland markii ay qabsadeen (Tuko Raq), Somaliland siyaasiyiintoodu waxay Habar-majeerteen u sheegeen wax ay ka qaracmeen oo ay waayadii hore uga turijireen. Soomaalidu waxay tiraahdaa “Raga Runtu Kama Nixiso” balse Somaliland waxay bilaabeen inay Habar-majeerteen ay u sheegaan hadalo ay ku qaracmeen. Siyaasiyiinta Somaliland waxay bilaabeen inay Habar-majeerteen ay ku yiraahdaan “Hadaanu damacno inaanu magaalada Garoowe intaan idiinkugu nimaano aanu idin karbaashno ma’aad lihidin ciidan aad isku difaacdaan oo ku dhaca inay nala dagaalamaan”.
Umadda gobta ah oo dhiigeeda sinjiyadda nasabka fiicani uu ku jiro, waxaa lagu yaqaan maalinta halista ugu weyni ay soo food saarto ayey guusha ugu weyn ay hantaan. Gobtu xiliga nabadda ah siday u kala daadsantahay oo u dayac badani uga muuqdo, ayaa marka ay halis gasho oo quwad ka balaaran la soo dul dhigo ayuu xidigeedu soo baxaa.
Maalintaas ayaa umadda gobta ah oo sinjiga adag uu danbasjiifkeedu rag-rag dhalay noqdaa. Mar kaas ayaa wax kasta oo la gudboon oo abaartooda ah uu rabi solansiiyaa. Mar kaas ayaa fool-adeyggooda iyo midnimadooda cadowgoodu markuu arko uu ka quustaa oo u ka niyad jabaa. Maantay midgihii midgaantu ay dhashay ee Habar-majeerteen, waxay tuute ciidan intay xirtaan ay hub ku xaragoodaan oo ay rag nasab ah iska dhigaanba waa kaas xaal koodu sidii gun lagu yiqiin uu sahalka ugu loodmey. Waa kuwaas midgihii Habar-majeerteen markay halisi ay soo food saartay ay labada garab ugu kala jabeen oo ay dhexdooda isaga soo hor jeedaan.
Dhowaan tuulada (Tuko Raq) ciidamada Somaliland markii looga cararay oo ay qabsadeen, waxaa warbaahinta ka nac-nac yiri inan gumeed Habar-majeerteen ah oo tolkiis aan looga baran inay rag iska dhiciyaan. Nin kaasina wuxuu ahaa agoon (C/weli Maxamed Cali “Gaas”). Agoon (C/weli) wuxuu warbaahinta uga faanay wax aan ka suuroobin midgaha habar-majeerteen, aana laga filankarin inay ka dhabeeyaan. Hadalka layaabka leh ee uu agoon (C/weli) warbaahinta uga faanay waxa weeye * Ciidamada Somaliland waanu iska difaacaynaa waana la dagaalamaynaa”. Faan badanaa adiga iyo waaridkaa alle cadaab “Xagee Lagu Arkay Midgaha Habar-majeerteen Oo Raga Iska Difaaca”.
ka dib xaafadda (Wadajir) ee magaalada Garoowe waxaa ku shiray, midgaha Habar-majeerteen kuwa ugu caqliga xun oo riyaha dhaba ee (Ciise Riyoole). Waxayna istuseen in hadalka Agoon (C/weli) ee ah “Waanu Isdifaacaynaa” in uu iyaga halis ku yahay, oo marka Somaliland ay maqasho hadal kaas inay weerar soo qaadayaan ayna qabsandoonaan xaafadda Wadajir ee magaalada Garoowe. Marka waxay go’aan ku gaareen inay cambaareeyaan agoon (C/weli), ayna maslaxaan oo ay raaligeliyaan Somaliland. Maslaxaad daas oo ay u wakiisheen (Ciise Riyoole) cawaan (faroole-Iinbadane).
Artina ugu layaabka badan oo maslaxaadii uu islahaa (faroole-Cawaan) aad Somaliland ku raali gelisid waxaa kamid ah. In uu jifada Agoon (C/weli) iyo beesha (Bah Ararsame) oo awalba aan rajo laga qabin inay ka heshiiyaan colaadii xumayd ee dhexmartay. Uu isku dayey inuu isku soofeeyo oo uu isku diro, maadaama isagaba beeshiisa debin loo dhigay oo uu aaminsanyahay in la rabo Somaliland inay qabsato. Sababta oo ah colaada (Bah Ararsame) iyo habar-majeerteen dhexmartay 4 jeer ayaa horey looga heshiiyey. Afartii jeerbana heeshiisyadu inay bur-buraan waxaa u sabab ahaa beesha Habar-majeerteen. Maxaa yeelay mar kasta waxay diidanaayeen heshiisyada la gaaro inay fuliyaan, maadaama ay rajo ka qabeen hadii beelaha kale ee Dhulbahante aysan u soo hiilin beesha (Bah Ararsame) inay ka guuleysan karaan.
Marka hada ah beesha (Bah Ararsame) iyo Habar-majeerteen waxaa dhexmaray labo todobaad ka hor sheshiis laysku gaadahayo, oo qoloba qoloda kale ay ugu hub iyo saanad uruursanayso. Intaasna waxaa ka horeeyey heshiis khayaano ah oo lagu qatalay beesha (Bah Ararsame) bishii Disembar bartamaheedii. Mudo haatan bil laga joogo nin la yiraahdo (Bashiir – Afqurunle) iyo agoon (C/weli) magaalada Buurtinle waxay isugu geeyeen, midgaha Habar-majeerteen wixii qori qaadikarey. Islamarkaasna waxay ku baaqeen shir lagu heshiisiinayo midgaha Habar-majeerteen iyo beesha (Bah – Ararsame). Iyadoo dadka badankoodu ay u dhegotaagayaan bal heshiiskaan cusubi waxa uu heshiisyadii hore ee fashilmay uu uga duwanaan doono. Ayaa subaxdii ay tariikdu ahayd (17/12/2017) waxay maleeshiyadii Habar-majeerteen, oo (Bashiir – Afqurunle) iyo agoon (C/weli) ay isugu geeyeen magaalasda Buurtinle, waxay weerareen oo ay qabsadeen degaanka (Gumburka Cagaaran) oo beesha (Bah Ararsame) ay degto. Nasiibwanaag duulaan kaasi waa’u fashilmay oo maleeshiyadaasi hal nin oo geel la jooga ayey gaadmo ku dileen.
Maalintii xigtey oo ay taariikhdu ahayd (18/12/2017) ayey beesha (Bah Ararsame) weerar soo qaaday oo ay degaanka (Gumburka Cagaaran) ay ka sifaysay midgaha Habar-majeerteen. Maalintaas midgaha Habar-majeerteen
waxay goobta dagaalka ay uga carareen 12 nin oo meyd ah. 15 nin oo dhaawac ahna waa ay la soo carareen oo waxay ku soo daadiyeen isbitaalka xaafadaha Garsoor iyo Israac u dhexeeya. Maalintaas kedib, midgaha Habar-majeerteen oo ay soo dagaal geliyeen (Bashiir – Afqurunle) iyo agoon (C/weli), waxay weerar ay ku qaadeen beesha (Bah Ararsame) 3 maalmood oo kale. Sadexdaas weerarna midgaha Habar-majeerteen si xun baa loogu jebiyey dagaalka. Xataa duulaankii ugu cuslaa oo maalintii ugu danbeysey dagaaladii dhacay, subaxdii hore weerarkii ay ku qabsadeen tuulada Qoriley midgaha Habar-majeerteen oo ay guryaha ku gubeen. Ilayn midgaha Habar-majeerteen niman wax haysan kara maahane, isla subaxdiiba weerar rogaal-celis ayaa inta lagu soo qaaday si xun loo karbaashey oo la soo cayrsadey.
Marka cadaawadda midgaha Habar-majeerteen ka dhexaysa hada waxa ay maraysaa heer, (faroole Cawaan) uu ku digto jabka ka soo gaarey (Bashiir – Afqurunle) iyo agoon (C/weli) weerarkii ay ku qaadeen beesha (Bah Ararsame). Isaga oo ku leh agoon (C/weli) hadaan nahay (Ciise Riyoole) intaad ka shaqaynaysid inay somaliland na qabsato, jifida aad ka soo jeedo ee (Cumar Hoogahaye) oo aad dagaalka gelisey oo sida xun ugu jabay baa talo kaaga baahane u tali. Oo koleyba fuley fuley dhalay baad tahay oo colaaddii lagaaga adkaaye, hada dadka aad usku baabi’isay oo 12 ka sanaddood is dilahayey wax u tar hadaad cid wax tarayysid.